As of Wed, 27 May, 2020 13:40
नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन पायोनियर कम्पनी मानिने इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस (आईएमई) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेललाई नेपाल व्यवस्थापन संघले गत महिना बेस्ट म्यानेजर अफ द इयरको उपाधिबाट सम्मानित ग-यो । नेपालका हरेकजसो निजी लगानीका कम्पनी प्रवद्र्धककै प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निगरानीमा हुने भएकाले उच्च तहको व्यवस्थापनले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नपाउने गरेको बताइन्छ । जसले निजी कम्पनीका व्यवस्थापकले आफ्नो क्षमता देखाउन नपाउने गरेको चर्चा चलिरहेको हुन्छ । तर, पोखरेल भने आफूले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएकै कारण परिणाम निकाल्न सफल भएको र व्यवस्थापन संघको नजरमा पनि पुरस्कारयोग्य हुन सकेको बताउँछन् । हुन पनि उनी एक दशकभन्दा बढी समयदेखि आईएमई समूहसँग जोडिएका छन् । विगत नौ वर्षदेखि आईएमईमा नेतृत्व तहमा रहेर काम गरिरहेका पोखरेलसँग एभरेस्ट बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकमा समेत काम गरेको अनुभव छ । पोखरेल आईएमई रेमिट्यान्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा निर्देशक हुन् भने ग्लोबल आईएमई बैंक, डिसहोम, स्मार्ट च्वाइस कम्पनी तथा आईएमई मोटर्समा बोर्ड सदस्य छन् । व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर पोखरेल रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको संगठन नेपाल रेमिट्यान्स एसोसिएसनका अध्यक्ष पनि हुन् । व्यवस्थापन संघद्वारा बेस्ट म्यानेजर अफ द इयर अवार्डबाट सम्मानित भएपछि पोखरेलसँग नेपालको कर्पोरेट सेक्टरमा व्यवस्थापनको अवस्था तथा चुनौतीलगायत रेमिट्यान्स तथा आईएमई समूहका अन्य भेन्चरहरूको अवस्थाका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल व्यवस्थापन संघबाट हालै बेस्ट म्यानेजर अफ द इयरको अवार्ड पाउनुभयो । व्यवस्थापनका क्षेत्रमा मुलुककै एउटा सम्मानित अवार्ड पाउँदा कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ?
व्यवस्थापन क्षेत्रमा नेपाल व्यवस्थापन संघ आफैंमा परिचित र राम्रो संस्था हो । त्यहाँ धेरै प्रोफेसनलहरू हुनुहुन्छ, जसले नेपालको व्यवस्थापन क्षेत्रलाई व्यावसायिक ढंगबाट माथि लैजान टेवा पु-याउँदै आउनुभएको छ । संघले बर्सेनि बेस्ट म्यानेजमेन्ट अफ दि इयर अवार्ड दिने गरेको छ, जसमा गएको वर्षको कामको मूल्यांकनस्वरूप मैले पाएको हुँ । अवार्डले मलाई निकै खुसी दिनुका साथै थप जिम्मेवारी बढाएको महसुस गरेको छु । मेहनतका साथ काम गरिएको थियो, नतिजा पनि उचित रूपमा पाउँदा खुसी लाग्नु स्वभाविक हो । ठूलो फोरममा प्रधानमन्त्रीबाट सम्मानित अवार्ड पाउँदा भोलिका दिनमा आफ्नो कर्मक्षेत्रलाई अझ जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलेको छ ।
गएको वर्षमा गरेको कामका आधारमा तपाईंलाई बेस्ट म्यानेजरका रूपमा अवार्ड दिइयो, त्यसरी उत्कृष्ट नै हुने गरी के–के काम गर्नुभएको थियो ?
नेपाल व्यवस्थापन संघबाट अवार्ड घोषणाको कुनै ‘सब्जेक्टिभ जजमेन्ट’ नभएर निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो । त्यही मापदण्डका आधारमा संघबाट निवेदन माग भयो । आवेदन माग भएअनुसार मैले पनि सहभागी हुने निर्णय गरेँ । तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर आफूले गरेका कामहरू राखेर आवेदन दिनुपर्ने थियो । सामूहिक छलफल, अन्तर्वार्तालगायतका विभिन्न चरण पार गर्दै आफ्नो पर्फमेन्स त्यहाँ भन्नुपर्ने थियो । उचित कामको मूल्यांकन गर्दै त्यो अवार्ड दिइएको हो । मैले काम गरेको आइएमई समूहको सफलतामा मेरो पनि हात छ । यो मेरो मात्रै सफलता नभएर सम्पूर्ण बोर्ड सदस्य, सल्लाहकार, कर्मचारी, शुभचिन्तक सबैको योगदान हो । त्यो सफलतामा मेरो पनि योगदान रहेछ भन्ने प्रमाणित भएर नै मलाई अवार्ड दिइयो भन्ने लाग्छ ।
नेपालको कर्पोरेट सेक्टरमा छोटो समयमै पुराना घरानासरह स्थापित भइसकेको आईएमई समूह, जहाँ तपाईं काम गर्नुहुन्छ । पुस्तौंदेखि जरा गाडेर बसेकाहरूसँग नयाँ समूहले प्रतिस्पर्धा गर्नु गाह्रो अथवा चुनौतीपूर्ण भएन ?
चुनौतीपूर्ण अवश्य पनि छ । नेपालको ‘सोसियो पोलिटिकल’ वातावरण, पूर्वाधार विकास, उपलब्ध स्रोतसाधन सबैका हिसाबले हेर्दा काम गर्न सजिलो छैन । हाम्रो समूहको विश्वास सधैं हामीले नेपालमा काम गर्नुपर्छ, नेपालमा विकास गर्नुपर्छ, त्यसमा हाम्रो सक्रियता हुनुपर्छ भन्नेमै केन्द्रित छ । व्यवसायलाई विविधीकरण पनि गरेका छौँ । चुनौती नै नभएको क्षेत्र विश्वका कुनै पनि मुलुकमा छैन, कतिपयमा कम होला तर कतिमा बढी, त्यति मात्रै फरक हो । चुनौती भए पनि नेपालमा अवसर छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । व्यवसायमा एक तहको सफलता हात पारे पनि धेरै काम गर्न भने बाँकी छ । नेपालको कर्पाेरेट क्षेत्रमा आईएमई समूहले राम्रो गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ । नीतिगत रूपमा सुधारको वातावरण बन्दै छ । हिजोका दिनमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा पनि देशमा काम गर्न नखोज्ने प्रचलन थियो अब हामीले स्थायी सरकार पाएका छाँै । पूर्वाधारको विकास पनि हुँदै छ । नेपालको जुन क्षेत्रमा पनि काम गर्ने हो भने सम्भावना र अवसर दुवै छ । यद्यपि नीतिगत स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोजर, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु आवश्यक छ ।
अहिलेको विश्वमा व्यवस्थापन आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम मानिन्छ । तर, नेपालमा भने कर्पोरेट सेक्टरमा पनि व्यवस्थापनलाई त्यति महŒव दिएको जस्तो लाग्दैन । म्यानेजर जतिसुकै सक्षम भए पनि प्रवद्र्धक नि हावी हुन्छन्, किन ?
कर्पाेरेट संरचनामा गएर नेपालमा काम गर्न थालेको धेरै समय भएको छैन । हामी सिक्ने चरणमै छौँ । नेपालमा पनि ठूला–ठूला व्यावसायिक घरानाहरू कर्पाेरेट संरचनामा गइसकेको अवस्था छ । स्वतन्त्र मानव संसाधन विभाग, विशेषज्ञ राख्ने र कर्मचारीलाई सम्पत्तिका रूपमा हेरिएको छ । आईएमई समूहले पनि कर्पाेरेट संरचनामै काम गरेको छ । अझ पनि नेपालको धेरै ठाउँमा सुधार हुन बाँकी छ । मालिकको डोमिनेन्ट पूर्ण रूपमा हट्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले जुनजुन व्यावसायिक घरानाहरू ग्रो गरिरहेका छन् तिनीहरू कर्पाेरेट संरचनामा गएर काम गरेका छन् । हिजोका दिनमा मालिकबाट फस्ट जेनेरेसन व्यवसाय सुरु भयो । त्यहाँबाटै सिक्ने काम भयो । समयसँगै सबै प्रक्रिया, निर्णयका तरिका, प्रविधिको प्रयोग फेरिएको छ । पहिलेको अवस्थामा मालिक हावी हुने प्रचलन नयाँ होइन, तर अहिले कर्पाेरेट हाउसमा सेकेन्ड जेनेरेसन तयार भएका छन् । विदेशमा प्रख्यात विश्वविद्यालयबाट पढेर सिकेर आएका व्यक्तिहरू छन् । पहिलेको तुलनामा व्यवसाय गर्ने तरिकामा सुधार हुँदै आएको छ । कर्पाेरेट हाउसहरूले पुरानो तरिकाबाट जाँदा बजारीकरण गर्न सक्दैनौँ भन्ने बुझिसकेका छन् । कम्पनीको साख बचाइराख्न र प्रतिस्पर्धी वातावरणमा अगाडि बढ्न हिजोको निर्णय गर्ने तरिका, व्यापारिक योजनाले पुग्दैन । अब नयाँ सोचका साथ काम गर्नुपर्छ जसले प्रतिस्पर्धालाई अझ खरो रूपमा उतार्न सक्नुपर्छ । प्रविधिको विकाससँगै अगाडि बढ्न नसक्ने कर्पाेरेट हाउसलाई कठिन छ ।
मुलुकको कर्पोरेट सेक्टरदेखि सार्वजनिक निकायसम्म कुशल व्यवस्थापकको खाँचो देखिन्छ । एउटै म्यानेजरले कुनै पनि संस्थालाई कायापलट गरिदिएका उदाहरणहरू पनि छन् । नेपालका अधिकांश सार्वजनिक र धेरै निजी कम्पनीहरू धराशायी हुनुमा सक्षम म्यानेजरको अभाव पनि प्रमुख कारण हो भनिन्छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
कम्पनीको सफलता वा दुर्भलतामा व्यवस्थापकको ठूलो हात हुन्छ । नीतिगत रूपमा निर्णय गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, निर्णयहरू स्वतन्त्र भए–भएनन् त्यसमा विचार गरिएन भने कम्पनी निश्चित पछाडितिर जान्छ । बोर्डमा जुन तरिकाले नीतिहरू निर्माण हुन्छ त्यसलाई नबुझेर कार्यान्वयनमा समस्या भएर संस्था बिग्रिएको पनि छ । कुनै पनि प्रमोटरले आफ्नो संस्था बिग्रियोस् भनेर सोच्दैन । आफूले बनाएको संस्था राम्रो होस् भन्ने सबैको इच्छा हुन्छ । राम्रो व्यवस्थापन भएमा कम्पनी निकै माथि उठ्न सक्छ । कम्पनीलाई परिवर्तन गराउन सक्ने भनेको व्यवस्थापन नै हो । कम्पनीलाई माथि उठाउन व्यवस्थापन र बोर्डको समझदारी राम्रो हुनुपर्छ । बोर्ड र व्यवस्थापकको लयमा संस्था चलाउनुपर्छ । दुवैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीका साथ पूरा गरेमा कम्पनी फेलुअर हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । बोर्ड र व्यवस्थापनको लय फरक भयो भने कम्पनीले लक्ष्य भेट्न सक्दैन ।
आईएमई भन्नेबित्तिकै रेमिट्यान्सको अर्को नाम भन्ने बुझिन्छ । तपाईंहरू पनि विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याउन त सफल हुनुभयो तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न त सक्षम हुनुभएन नि ? रेमिट्यान्स पाउनेहरूलाई उपभोगमुखी बनाउनुभयो, उत्पादनमुखी त बनाउन सक्नुभएन भन्न सकिँदैन र ?
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर काम गरिरहेको संस्थाको स्कोप के हो भन्नेमा हेरिनुपर्छ । उसले गर्ने काम के हो ? हाम्रो काम भनेको विदेशमा नेपालीहरूले कमाएको पैसा सुरक्षित रूपमा नेपालमा ल्याएर उसको परिवारको हातमा पु-याइदिने हो । हाम्रो त्यो मुख्य काम हो । यसका साथसाथै सुरक्षित रूपमा रेमिट्यान्स पठाउनुपर्छ, यदि सुरक्षित रूपमा नपठाए तपाईंलाई यो घाटा देशलाई यो घाटा हुन्छ, रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर वित्तीय साक्षरताका क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौँ । बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न र बैंकिङ च्यानल प्रयोग गराउन पनि भन्छाँै । राष्ट्र बंैकले निकाल्ने विभिन्न बोन्डहरूलाई पनि प्रमोट गर्ने काम सहयोग गरेका छौँ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ५६ प्रतिशत घरले कुनै न कुनै रूपमा रेमिट्यान्स पठाउँछन् । त्यो उपभोगमा खर्च हुन्छ । एउटा पूर्वाधार, सेयर बोन्ड, उद्योगमा लगानी गरेमा उत्पादनशील भन्न सकिन्छ । अर्काे पाटो जुन व्यक्तिले राम्रोसँग खान–लगाउन पाएको हुँदैन त्यसले खान लगाउन पाउँछ । औषधि–उपचार, बालबच्चाको शिक्षा दिन पाएको हुन्छ, बासको व्यवस्था गर्न सक्छ । घरमा आवश्यक चिजको प्रयोग त गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा उपभोग बढ्नुलाई नराम्रो मान्न सकिन्न । त्यो उपभोग अयातमुखी हुनु भएन । अहिले हामीले आयातमुखी भएर उपभोग ग-यौं, यो नराम्रो हो । यदि देशमै उत्पादन हुन्छ र उपभोग बढ्छ भने त्यसले उपभोक्ता, उत्पादक, देशको अर्थतन्त्र सबैलाई राम्रो गर्छ । नेपालमा विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्समार्फत आयो तर आयात गर्नुपर्ने सामग्रीमा विदेश नै गयो, उत्पादनमा त्यसले टेवा पु-याउन सकेन । मानिसको आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्नुपर्छ । उपभोगबाट बचेको पैसा बैंकिङ च्यानलमा राखेर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकियो भने त्यसको प्रभाव सकारात्मक हुन्छ । अहिले उपभोग बढायो तर त्यो उपभोग गर्ने सामान नेपालमा बनेन, आयातमुखी भयो भन्ने चासोको विषय हो । त्यसले व्यापारघाटामा असर गरेको हो ।
आईएमई समूह फाइनान्सियल सेक्टरमा जति सबल रूपमा छ, सेवा र व्यापार क्षेत्रमा पनि उदीयमान समूहकै रूपमा आइरहेको छ । तर, मुलुकको आवश्यकता रहेको उत्पादनशील क्षेत्रमा त तपाईंहरूको उपस्थिति अलि कमजोर हुनुको कारण के हो ?
हामीले फाइनान्सियल क्षेत्रबाटै काम सुरु गरेका हौं र हाम्रो अनुभव पनि यही क्षेत्रमै भयो । हाम्रो लगानी विस्तार पनि फाइनान्सियल क्षेत्रमै ग-यौँ । बैंकिङ पहुँच बढाउन देशभित्र मात्रै नभएर तीनवटा देशमा प्रतिनिधि कार्यालय विस्तार गरिसकेका छौँ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई माथि उठाउन हाम्रो पहल राम्रो छ । त्यसैगरी बिमा क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गरेका छौँ । अहिले पनि बिमा क्षेत्रमा ९० प्रतिशत जनतामा पहुँच बाहिर छन् । सरकारको नीति पनि डिजिटल नेपाल बनाउने छ, त्यसमा हामीले पनि आईएमई पे भनेर डिजिटल वालेट सुरु गरेका छौँ । वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशिता बढाउने र नेपाली समाजलाई ‘लेस क्यास’ बनाउने दिशामा हाम्रो योगदान हुनेछ । सूचनाको पहुँच पु-याउन डिसहोमले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । गाउँ–गाउँमा सूचना पु-याउने काममा डिसहोमको महŒवपूर्ण योगदान छ । पूर्वाधारमा चन्द्रागिरीलगायत हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लगानी गरेका छाँै । कोर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हामी जान सकेका छैनाँँै । भोलिका दिनमा यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा बोर्डले केही सोच बनाएको पनि हुन सक्छ ।
सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्ने विषय कहाँ पुग्यो ?
सिमेन्टमा लगानी गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । लगानी सम्मेलनमा पनि निजी क्षेत्रको परियोजनाबाट शोकेसमा हाम्रो परियोजना थियो । मैले वित्तीय क्षेत्र रेमिट्यान्स र डिजिटल वालेटमा केन्द्रित भएकाले तत्कालका लागि यसमै जोड दिएको छु ।
तपाईं त नेपाल रेमिट्यान्स एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । मुलुकमा अहिले भित्रिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह अथवा यसको वृद्धिदर कत्तिको स्वाभाविक छ ?
चालू वर्षको सात महिनाको अवस्था हेर्दा नेपाली रुपैयाँ २७-२८ प्रतिशत र डलरमा १६-१७ प्रतिशतको वृद्धि छ । रेमिट्यान्स जुन रूपमा भित्रिएको छ यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ । गएको वर्षको सात महिनाको तुलनामा चालू वर्षको सात महिनामा रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको संख्या घटेको छ । रोजगारीमा जानेको संख्या झन्डै ४० प्रतिशतले घट्दा पनि रेमिट्यान्स बढ्नु सकारात्मक हो । मलेसिया बन्द छ । मलेसियामा रोजगारी पुनः सुचारु गर्ने विषय पनि आएको छ । भोलिका दिनमा मलेसियाबाट पनि रेमिट्यान्स आउने र विभिन्न देशबाट आउने रेमिट्यान्ट पठाउने क्रम बढ्छ ।
विगतदेखि नै हुन्डी ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ भनिन्छ । यतिबेला वैधानिक च्यानलको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ कि छैन ?
पहिलेको तुलनामा औपचारिक बाटाबाट पैसा पठाउने क्रम बढेको छ । कोरियाबाट आउने ठूलो रकम औपचारिक बाटोबाट आउन थालेको छ । सरकारले इन्भोसमा केही टाइट गरेको छ । सरकारले हुन्डीमा लाग्नेलाई कारबाही पनि गरेको छ । नयाँ क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच बढेको छ, रेमिट्यान्स कम्पनीहरू पुगेका कारणले हुन्डी घट्दै आएको छ । अनौपचारिक बाटोलाई कडाइ गर्दै जान सकेमा रेमिट्यान्स वृद्धि हुन्छ । देशमा विकास अवसर बढ्दै गएपछि रेमिट्यान्स बन्द हुन्छ कि भन्ने चासो पनि छ । भोलिका दिनमा रेमिट्यान्ट अझ बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले ९० प्रतिशतभन्दा धेरै युवा ‘ब्लु कलर’मा रोजगारीमा गएका छन् । अहिले १ हजार-१५ सय रियालमा काम गर्न जानेहरू छन् भने भोलि देशमा विकास भयो, सिप सिकाउन थालियो भने ५-७ हजार रियालमा काम गर्न जान्छन् । रोजगारीमा जानेको संख्या घटे पनि रकम भने भोलिका दिनमा अझ बढ्छ ।
आईएमई समूहको अबको नयाँ लगानी कुन परियोजनामा ?
एक–दुईवटा परियोजनाका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । परियोजना पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । लगानी सम्मेलनमा शोकेस गरिएका परियोजना नै हुन् । पूर्वाधार क्षेत्रमा मेरो संलग्नता कम छ । आईएमई पे विस्तारलाई अहिले आक्रामक रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । दोहोरो अंकको वृद्धि छ । आईएमई ब्रान्डले पनि डिजिटल वालेटलाई अगाडि बढाउन सहयोग पु-याएको छ ।
इन्टरनेट पहुँच त कमै छ, यस्तो अवस्थामा बजारीकरण कत्तिको सहज छ ?
सरकारकै डेटाले ६५ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेट पहुँचमा रहेको देखाएको छ । स्मार्ट फोन पहुँच राम्रो छ । मोबाइल सेवाको पहुँच १ सय ३५ प्रतिशत छ । इन्टरनेट सेवामा पहुँच बढ्दै गए पनि सेवा विस्तार गर्न निकै चुनौती पनि छन् । एप वेस्डमा रहेर भुक्तानीको कारोबार गर्न वर्तमान अवस्थामा सहज छैन । साक्षरता बढाउन, विश्वास दिलाउन धेरै काम गर्न बाँकी छ । मोबाइल प्रयोगकर्ता भए पनि भुक्तानी कारोबार मोबाइल र एप बेस्ड भएर गर्ने नेपालीको संख्या कम छ । त्यसलाई बढाएर लैजानु हाम्रो मुख्य काम हो ।